Usoro ọgwụgwọ maka aphasia post-strok: ọ bara uru? - Nzuzo
Here nọ ebe a: Home » Artikoli » aphasia » Usoro ọgwụgwọ maka aphasia post-strok: ọ bara uru?
La Ntụle Cochrane nke Brady et al. (2016)  tụlere ihe mgbochi 57 nke enweghị usoro site na ngụkọta 3002 ndị sonyere.
27 gosipụtara nsonaazụ clinically na onu ahia di nkpa na nkwukọrịta ọrụ nke onye ọrịa, n'ọgụ, ide na igosipụta asụsụ (mana uru etinyere na ọnụ ọgụgụ pere mpe, echebereghị oge ndị ọzọ)
9 egosighi oganihu na nkwukọrịta arụ ọrụ
Ọganiihu arụ ọrụ ka ukwuu na ndị natara ike dị elu, nnọkọ ugboro ma ọ bụ n'ọnọdụ ọ bụla maka ogologo oge. Agbanyeghị, ịrị elu nnọkọ ike maka ọtụtụ ndị ọrịa amụbawo n'ihe ize ndụ nke agbahapụ nke usoro nhazigharị.
Dabere na ndị dere, ya mere, okwu ọgwụgwọ maka l 'aphasia post-stroke dị irè n'ihe banyere ime ka nkwukọrịta ka ọrụ arụ ọrụ, ọgụgụ, ide ihe na ịkọwapụta ma e jiri ya tụnyere enweghị ọgwụgwọ. Enwere ụfọdụ ihe akaebe na-akwado echiche nke uru dị ukwuu na-esochi ike dị ukwuu, ugboro ole na oge nke nnọkọ ahụ, n'agbanyeghị ihe egwu nke agbahapụ nnukwu ọrụ ahụ.
aphasia bụ nsogbu okwu a na-enweta site na mmebi ụbụrụ (ọ na-abụkarị na mpaghara ikpere ekpe). Ihe na - akpata ya nwere ike ịbụ ụdị dị iche iche (ọnya afọ, isi ọwụwa, akpụ). Followinggbaso nchoputa nke aphasia a na-egosipụta ọgwụgwọ okwu. Kedu ihe gosiri na arụmọrụ ya dị?
Tutte le nostre app sono utilizzabili gratuitamente online. Per usare le web-app anche offline sul proprio pc è possibile download aphasia gaa. Nchịkọta a nwere ngwa-weebụ 5 (Dee okwu ahụ, nghọta Lexical, inggụ aha nke mkpụrụ okwu, Ghọta nkeji okwu na tebụl nke mkpụrụ okwu) iji mee ihe na PC na ihe karịrị otu puku peeji nke kaadị nwere ọrụ iji bipụta, tebụl nkwukọrịta na ihe dị iche iche.
Also nwekwara ike inwe mmasị na: Mmekọrịta dị n'etiti okike, ọgụgụ isi na ọrụ ndị isi
 Brady MC, Kelly H, Godwin J, Enderby P, Campbell P. Nkwupụta okwu na ọgwụgwọ asụsụ maka aphasia na-eso ọrịa strok. Ebe nchekwa data Cochrane nke Nyocha Nyocha 2016, Nke 6. 000425. Art. No: CDXNUMX
aphasia, agadi, ọrịa strok, okwu Agwọ, ikwu okwu
Usoro ọgwụgwọ maka aphasia post-strok: ọ bara uru?2020-07-182020-09-24http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngỌzụzụ ọgụgụ isihttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2020/07/photo-1592496001020-d31bd830651f.jpg200px200px
Otutu sclerosis na telererapyIsiokwu, otutu sclerosis